"ကားလုပြီး အကျဉ်းသား ၄၁ ဦးစလုံး ထွက်ပြေးနိုင်ခြင်းသည် အလွန်အံသြစရာကောင်းကြောင်း ဘားအံထောင်ကျဖူးသူ မှတ်ချက်ပြု" | dawnmanhon
"ကားလုပြီး အကျဉ်းသား ၄၁ ဦးစလုံး ထွက်ပြေးနိုင်ခြင်းသည် အလွန်အံသြစရာကောင်းကြောင်း ဘားအံထောင်ကျဖူးသူ မှတ်ချက်ပြု"
တစ်ကျွန်းကျဦးဆောင်၍ ဘားအံထောင်ဖောက် ထွက်ပြေးမှု ၁၄ ဦး ပြန်လည်ဖမ်းမိ
ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းကျခံထားရသူ ဦးဆောင်၍ ဘားအံအကျဉ်းထောင်ရှိ အကျဉ်းသား ၄၁ ဦးက ယမန်နေ့နံနက်တွင် ထောင်ပိုင်ကားကိုလုယူထွက်ပြေးရာ ည ၈ နာရီအထိ ၁၄ ဦးပြန်လည်ဖမ်းမိခဲ့ပြီး လွတ်မြောက်နေသော ၂၇ ဦးကို မြန်မာ - ထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်အပါအ၀င် နေရာစုံ၌ ပိတ်ဆို့ရှာဖွေနေသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်နံ နက် ၈ နာရီ မိနစ် ၄၀ ဝန်းကျင်က ဘားအံမြို့အကျဉ်းထောင်ဝင်းအတွင်း အကျဉ်းသားများသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေချိန်တွင် လူသတ်မှု၊ လက်နက်မှု၊ မူးယစ်ဆေးမှုတို့ဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ကျနေသူ ၄၁ ဦးက ထောင်ပိုင်အမှိုက်သိမ်းကားကို လုယူထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘ခေါင်းဆောင်တဲ့သူက ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ကျတဲ့သူ။ အမှိုက်သယ်တဲ့ယာဉ်ကိုမောင်းပြီး အကျဉ်းထောင်ခြံတံခါးလေးချပ်ကို တိုက်ပြီး ထွက်သွားတာ။ အရာရှိတစ်ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်’’ ဟု အကျဉ်းဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမင်းထွန်းစိုးက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ အကျဉ်းသား ၄၁ ဦးစလုံး တစ်ချိန်တည်း ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ခြင်းမှာ အကျဉ်းဦး စီးဌာနတွင် သမိုင်းဝင်ဖြစ်စဉ်အ ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားကြောင်း အ ကျဉ်းဦးစီးဌာနမှ အရာရှိဟောင်း တစ်ဦးက ၎င်း၏ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် ရေးသားထားသည်။
မူးယစ်ဆေးနှင့် လက်နက်မှု များဖြင့် ထောင်ဒဏ်တစ်သက် တစ်ကျွန်းကျနေသော ကျော်မိန် လ (ခ) အရှောင်က ထောင်ကားယာဉ်မောင်းအကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်း ဒုတပ်ကြပ် ကျော်ဝင်းစိန်ကို ဆွဲချ ထိုးကြိတ်၍ ကားကို မောင်းပြီး ထောင်တံခါး လေးဆင့်ကို တိုက်ဖွင့်ကာ ထောင်ရှေ့ရှိ ဘားအံ-လှိုင်းဘွဲ ကားလမ်းအတိုင်း ထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အမှိုက်ကားပေါ်နှင့် ကားအောက်တွင် အကျဉ်းသား စုစုပေါင်း ၄၁ ဦး လိုက်ပါသွားခဲ့သည်ဟု ထုတ်ပြန်သည်။ ၎င်းတို့ကိုတပ်မတော်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ (BGF) က ပိတ်ဆို့ရှာဖွေရာ ဦးဆောင်သူ အပါအ၀င်စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်ည ၈ နာရီခန့်အထိ ၁၄ ဦး ပြန်လည်ဖမ်းမိခဲ့သည်ဟု ဦးမင်းထွန်းစိုးက ပြောသည်။
‘‘မြ၀တီမှာဆို ပူးပေါင်းဂိတ် မှာ တစ်ဖွဲ့၊ ချစ်ကြည်ရေးတံတား မှာ တစ်ဖွဲ့၊ သောင်ရင်းမြစ်ကနေ ဖြတ်မကူးနိုင်အောင်လည်း BGF ကစောင့်နေတယ်။ ထောင်သား တွေနဲ့ တူနိုင်တဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာ တွေ၊ အထူးသဖြင့် လက်ကောက် ၀တ်နေရာမှာ ဒဏ်ရာရှိတဲ့သူ တွေ၊ မသင်္ကာရသူတွေကို သ တင်းပို့ဖို့ အကုန်ဖြန့်ထားတယ်။ ထိုင်းဘက်ကို မကူးနိုင်အောင်’’ ဟု မြ၀တီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး ကြီးအောင်နိုင်ထွန်းက ပြော သည်။
အမျိုးသားရေး ပညာရေးသ ပိတ်ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဘား အံအကျဉ်းထောင်တွင် ခုနနှစ် ပြစ် ဒဏ်ကျခံခဲ့ဖူးသော ကိုနန္ဒာစစ် အောင်က . . .
‘‘ဘားအံထောင်မှာ ထောင်ဘူးက အဲဒီလောက်ကားနဲ့ တိုက်ပြေးရအောင်မလွယ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ရှည်နေလာတဲ့ ထောင်။ ထောင်ကျအဆောင်မှာ အဆောင်ဝင်းသက်သက်။ တိုက်ဝင်းကသက်သက်။ ထောင်ကျတွေကို ထောင်ဝင်းထဲ အဲလိုလူ ၄၀ လောက်ထုတ်ထားလေ့မှ မရှိ တာ။ ထောင်ကျဆောင်နဲ့ မျက် နှာချင်းဆိုင် ဆေးခန်းတောင်လွယ် လွယ် သွားလို့ရကြတာမှ မဟုတ် တာ။
ထောင်ဘူးတံခါးက ဒီ လောက်ထုထည်ကြီးကြီးကြီးကို။ ကားနဲ့တိုက်ဖွင့်ဖို့ လွယ်ပါ့မလား။ ကျွန်တာ့်အထင်တော့ မပွင့် လောက်ဘူးထင်တယ်။ (ကျွန် တော် ထင်မြင်ချက်ပြောတာပါ။)
နောက်ဒီနေ့က တနင်္ဂနွေ အ လုပ်ဘုတ်ရော၊ ထောင်အပြင် ဘုတ်ပါပိတ်ရက်။ ထောင်တံခါး မကြီးကို ပိတ်ထားတာ။ ထောင် ဝင်းထဲရော၊ အပြင်ကိုရော အ ကျဉ်းသား အလုပ်ဘုတ်မှ မထုတ် တာ။ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာကလွဲလို့ ခါတိုင်းရက်တွေမှ ဘူးတံခါးပေါက် ငယ်က အပြင်ဘုတ် အဲ ၈ နာရီခွဲ လောက်ဆိုထုတ်သေးတယ်။ ထူး ဆန်းတယ်။ ဘားအံထောင်မှာ ၂၀၀၅ ကနေ ၂၀၁၂ အထိ ကျွန်တော် ခုနစ်နှစ် နေလာရတာ။ ဒီထောင်ဓလေ့ကို ကျွန်တော် အ တော်နားလည်တယ်။ နောက်. . . အဲထောင်ကားမောင်းတဲ့ ကိုကျော် ဝင်းစိန်ဆိုတာ ထောင်ဝန်ထမ်းမိသားစုသန္ဓေ။ ထောင်သဘာ။ အတော်သတိကြီးတဲ့သူ။ နောက် ထောင်နှစ် အကန့်သတ်မရှိတို့ လွတ်ရက်မရှိတို့ ဆိုတာက ပုံမှန် အားဖြင့်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရှိတုန်းကတိုက်မှာထားတာ။ အပြင် ထောင်ကျဆောင်ထားလည်း သူတို့ကို ထောင်ဝင်းထဲတောင် အလုပ်မှ ထုတ်ခိုင်းလေ့မရှိတာ။ အတော်အံသြစရာကိစ္စပဲ’’ဟု ၎င်း ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ယမန်နေ့ည က ရေးသားထားသည်။
ထို့အပြင် လွန်ခဲ့သောလေး နှစ်ခန့်က နေအိမ်မီးလောင်မှု ကြောင့် ထောင်သုံးလကျဖူးပြီး ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံ အထိုက်အလျောက်ရှိခဲ့သူ ကလေးလွင်ပြင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့မှကိုသန့်ဇင်လင်းက လုံခြုံရေးအထပ်ထပ် တားဆီးကာရံထားလေ့ရှိသည့် အကျဉ်းထောင်ဝင်းအတွင်းမှ လူ ၄၀ ကျော် တစ်ပြိုင်နက်ထွက် ပြေး လွတ်မြောက်သွားသည့် ဖြစ် ရပ်သည် အလွန်အံ့သြစရာ ကောင်းသည်ဟု ဝေဖန်သည်။
‘‘ထောင်ရဲ့မူအရ တံခါးတစ် ချပ်ဟာ ဖွင့်ပြီးလို့ ဖြတ်သွားပြီး တာနဲ့ ပြန်ပိတ်တာပဲ။အထဲက အလယ်မှာလဲ ထောင်အရာရှိနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ၂၄ နာရီ တာဝန်ယူ ရတဲ့ အဆောင်လေးက ရှိနေသေး တယ်။ နောက်တစ်ခုက ထောင် တွေမှာပေးထားတဲ့ ကားတွေအ များစုက ဘယ်ကားမှ မကောင်း ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီကားအများ စုဟာ စတတ်ဘက်ထရီမကောင်း လို့ ထောင်သားတွေနဲ့ တွန်းနှိုးရ တာက ဆောင်းတိုင်းလိုလိုပဲ။ အဲ ဒီလို အတွန်းကောင်းလို့ ထောင် သားတွေ ထွက်ပြေးဖူးတယ်။ ဒီ တစ်ကြိမ် ဘားအံထောင်ကနေ ကားလုပြီး မောင်းပြေးတဲ့သူတွေ အင်မတန် ကံကောင်းတာပဲ။ ကားပေါ် လူ ၄၀ ကျော်တက်တာ ထောင်အထဲက တာဝန်ရှိသူတွေ ဘာမှမသိလိုက်ဘူး။ တရကြမ်း မောင်းတဲ့ ကားပေါ်ကနေ တစ် ယောက်မှ လိမ့်ကျမကျန်ခဲ့ဘူး။ ပိုကံကောင်းတာက ထောင်တံခါး သော့ကိုင်ရတဲ့ ဝန်ထမ်းပါ၊ အမြဲ အပေါက်ဝမှာ ရပ်ပြီးတာဝန်ယူရ တဲ့သူက ကားဝင်တိုက်တဲ့ တံခါး တွေနဲ့ မတိုက်မိ၊ မထိခိုက်တာပဲ၊ အင်မတန် ကံကြီးပါပေ့’’ ဟု လူ မှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားထား သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အကျဉ်းထောင် ၀န်ထမ်းများရှိလျက် အကျဉ်း သားအုပ်စုလိုက် လွတ်မြောက် ခြင်းသည် တာဝန်ရှိသူများ၏လုပ် ရပ်ကို ဆန်းစစ်ရန်လိုကြောင်း ဘားအံမြို့ခံများနှင့် အရပ်ဘက် အဖွဲ့များက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်သည်။
‘‘ဖြစ်ပြီးမှ ပြောတာမျိုး မ ဟုတ်ဘူး။ အကျဉ်းထောင်က အများကြီးပေါ့လျော့တယ်။ အခု လွတ်သွားသူတွေက လမ်းစရိတ် ဘာညာရဖို့ လုယက်၊ လူသတ်ပြီးထွက်ပြေးဖို့လည်း ၀န်လေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ သတိနဲ့သွားလာကြဖို့ မြို့ခံတွေကို သတိပေးနေတယ်’’ဟု လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဘားအံမြို့နယ်ကော်မတီဝင် ဦးဇော်ရဲထက်က ပြောသည်။
အကျဉ်းသား ၄၀ ဦး တစ်ပြိုင်နက်လွတ်မြောက်ခြင်းသည် သံသ ယဝင်စရာဖြစ်နေသည်ဟု နိုင်ငံ ရေးစိတ်ပါဝင်စားသူ ဦးမင်းညွန့် က ပြောသည်။
‘‘သိပ်လွယ်လွန်းတော့ လည်း သံသယရှိစရာပဲလေ။ ဘာကြောင့် ဒီလောက်လွယ်ရတာလဲ’’ ဟု မေးခွန်းထုတ်သည်။
ကရင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမင်းနောင်၏ဖုန်းသို့ ဆက် သွယ်မေးမြန်းရာ ၎င်း၏မိသားစု ဝင်တစ်ဦးက ဖုန်းကိုင်ဆောင်ပြီး ဆက်သွယ်မည်ဟု ဆိုသော်လည်း ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိပေ။ အကျဉ်းသားများ ထွက်ပြေးလွတ် မြောက်မှုအတွင်း အကျဉ်းထောင် တာဝန်ရှိသူများအား မည်ကဲ့သို့ အရေးယူမည်ကို မသိရသေးဟု အကျဉ်းဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်)က ပြောသည်။
ထွက်ပြေးသည့် အကျဉ်း သား ၄၀ ဦးဖြစ်ကြောင်း အကျဉ်း ဦးစီးဌာနက ပြောသော်လည်း ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က မီဒီယာအချို့အား ၄၁ ဦးဟု ဖြေကြား
ထားသည်။ ထွက်ပြေးသူများအ နက် ၂ နှစ်ပြစ်ဒဏ်မှလွတ်မြောက် ရန် သုံးလသာလိုတော့သည့် အကျဉ်းသားတစ်ဦးလည်း ပါဝင်သည်ဟု ဒေသခံများက ဆိုသည်။ လွတ်မြောက်နေဆဲအကျဉ်းသား များကို လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်ရှိ သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်းတွင်လည်း လိုက်လံရှာဖွေနေသည်။
ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တော်တရားသူကြီးချုပ်ဦးဆောင် သော စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က ဘားအံအကျဉ်းထောင်ကို စက်တင်ဘာ ၆ ရက်က သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ သေးသည်။ ဘားအံအကျဉ်း ထောင်တွင် အကျဉ်းသားနှစ် ထောင်ခန့်ရှိသည်။
dawnmanhon: "ကားလုပြီး အကျဉ်းသား ၄၁ ဦးစလုံး ထွက်ပြေးနိုင်ခြင်းသည် အလွန်အံသြစရာကောင်းကြောင်း ဘားအံထောင်ကျဖူးသူ မှတ်ချက်ပြု"